Fampisehoana nitera-doza : telo no maty, am-polony naratra | NewsMada
Fampisehoana nitera-doza : telo no maty, am-polony naratra
Vokatry ny fifanosehana teo am-pidirana ny vavahady nanaovana ny fampisehoan’ny tarika Jean Aimé sy Elidiot, tao Antanifotsy Ambatondrazaka, ny alatsinainy teo no niteraka ity loza ity. Telo no namoy ny ainy, maty voahitsakitsaka. Amin’ireo am-polony naratra, nisy no tena voa mafy.
Vehivavy ny roa amin’ireo, ary zazalahy ny fahatelo. Araka ny vaovao avy any an-toerana ihany, miisa efatra ireo miady amin’ny fahafatesana. Tsy nanamarina izany anefa ny avy amin’ny mpitandro filaminana. Maromaro ireo nahazo fitsaboana ka afaka namonjy ny fodiana.
Araka ny fanazavana azo, taraiky ny famoahana ny vavahady lehibe nivoahan’ny olona ka niteraka fifanosehana izay niafara tamin’izao loza mahatsiravina izao.
Na hatrany amin’ny hopitaly aza, sahirana ny dokotera tamin’ny fifanosehan’ny olona namonjy tany an-toerana. Tao ireo mpitondra naratra kanefa maro koa ireo olona nifanesika nijery sao misy havany sy liana amin’ny zava-mitranga.
Tonga teny amin’ny toerana nanaovana fampisehoana ny mpitandro filaminana nanao ny fandihadiana rehetra.
Anisan’ny mahatonga loza ny resaka fidirana na fivoahana eo amin’ny vavahady rehefa misy fampisehoana tahaka izao. Tsy voalohany ny zava-nitranga, niseho tany Ambatondrazaka tahaka ity, fa efa nisy fahafatesana olona ihany koa nitranga vokatry ny fifanosehana tamina fampisehoana, taona vitsy lasa izay.
Amin’ny ankapobeny, tompon’andraikitra amin’ny toe-javatra tahaka ny mpikarakara. Any amin’izy ireo no mifatratra ny rihitra rehefa mandeha ny famotorana ataon’ny mpitandro filaminana. Mahatonga ny olana ny tsy fahaiza-mandamina sy ny tsy filaminan’ny mpijery. Eo ny ilana ny maha matihanina amin’ny fikarakarana hetsika. Eto amintsika mantsy, mbola vitsy ireo maka matihanina amin’ny fikarakarana fampisehoana fa vitan’ny tsotsotra eny ihany izany. Rehefa miteraka loza mahatsiravina tahaka izao vao tonga saina. Anjaran’ny mpikarakara ny maka lesona amin’ny tranga toy ity tany Ambatondrazaka ity.